China CBK208 အသိဉာဏ်ကင်းသောစက်မရှိသောစက်ရုပ်ကားရေဆေးစက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ CBK Carwash
CBK208 သည်တကယ်ပင်စမတ်ကျသည့် 360 touchless ကားအဝတ်လျှော်စက်တွင်အလွန်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည်။ အသိဉာဏ်မရှိသောကားအဝတ်လျှော်စက်၏အဓိကကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူမှာနိုင်ငံတကာမှကျော်ကြားသောအမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်။ PLC ၏ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည်ဂျပန်မှ Panasonic ဖြစ်သည်။ ဂျာမနီမှ SIEMENS ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံအလင်းရောင်ရောင်ခြည်သည် BONNER ဖြစ်သည် / OMRON OF Japan, ရေစုပ်စက်သည်ဂျာမနီ၏ PINFU ဖြစ်ပြီး ultrasonic သည်ဂျာမနီ၏ P + F ဖြစ်သည်။
CBK208 သည် Built-in compressed air dry ခြောက်သွေ့မှုစနစ်ကိုတိုးမြှင့်ပေးပြီးပလပ်စတစ်ပန်ကာ ၄ လုံးပါ ၀ င်သောကြောင့် ၅.၅ ကီလိုဝပ်မော်တာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည်။
အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကြောင့်ပစ္စည်းကိရိယာ၏ရေရှည်လည်ပတ်မှုသေချာစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းကိရိယာအာမခံချက်ကို (၃) နှစ်သက်တမ်းရှိစေပြီးသင့်အားစိုးရိမ်ပူပန်မှုကင်းဝေးပြီးသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
Min.Order အရေအတွက် - 1 သတ်မှတ်မည်
Supply နိုင်ခြင်း: 300 သတ်မှတ် / လ
မြင့်မားသောဖိအားရှိသောရေသည် ၂၀ ဘားအထိရှိသောကြောင့်ဖုန်ကိုအလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်သည်။
၃၆၀ ဒီဂရီစက္ကန့် ၆၀ အတွင်းလှည့်ပါ။
4.Ultrasonic တိကျသော positioning ကို။
အဆင့် 1 ကိုယ်ထည်ဆေးကြော
မွေးဖွားသောဂျာမနီ Pinfu သည်အဆင့်မြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးရေစုပ်စက်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရည်အသွေး၊ စစ်မှန်သောရေဓားဖြင့်ဖိအားပေးခြင်း
အဆင့် ၂ 360 မှုန်ရေမွှားခေါင်းလျှော်ရည်
အဆင့်3မြင့်မားသောဖိအားအဝတ်လျှော်
၁၇ အရည်အသွေးမြင့်သောသံမဏိ ၂၅ ဒီဂရီကဏ္ spr မှုန်ရေမွှား၊ ရေချွေတာခြင်းနှင့်အစွမ်းထက်သောသန့်ရှင်းရေးသည်ဆန့်ကျင်ခြင်းမဟုတ်ပါ
အဆင့်4မှော်ပူဖောင်း
အဆင့်5ဖယောင်းမိုး
ရေဖယောင်းသည်ကားဆေး၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မြင့်မားသောမော်လီကျူးပေါ်လီမာအလွှာတစ်ခုဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ ကားပါကင်တွင်အကာအကွယ်အဖုံးတစ်ခုရှိပါက၎င်းသည်အက်စစ်မိုးနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုထိရောက်စွာတားဆီးနိုင်သည်
အဆင့် ၆ လေခြောက်သည်
ပလပ်စတစ်ပန်ကာအားလုံးသည်အလုံး ၅ လုံးနှင့်အလုပ်လုပ်သည်။ 5KW ။ vortex အခွံကျယ်။ ဒီဇိုင်း၊ လေဖိအားသည်၊ လေမှခြောက်သွေ့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုပိုရှိသည်
CBK အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ -
အိမ်သုံးကားများသန့်ရှင်းရေး၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်သန့်ရှင်းရေး၊ ပိုးသန့်ဆေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လိုအပ်သည့်ဆေးဝါးယာဉ်များ၊ မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းများ၊ မြေအောက်ရထားများနှင့်ကုန်တင်ကားကြီးများစသည်တို့ပါဝင်သည်။
၁ ။ ဓာတုပစ္စည်းများသည်ကားကိုတကယ်သန့်ရှင်းပေးသည်။ ဟုတ်လား
သူတို့ကိုယ်သူတို့မဖြစ်စေပါနှင့်။ သင်မကြာခဏပင်ပန်းခြင်းနှင့်ပေါရာဏဖြစ်သောပြားချပ်ချပ်ပန်ကာမှုန်ရေမွှားလက်များကဲ့သို့မတတ်နိုင်သောမြင့်မားသောဖိအား application များနှင့်အတူထုတ်လုပ်သူများထံမှမကြာခဏကြားရလိမ့်မည်! အကယ်၍ ထိုအရာသည်မှန်ကန်ပါကသင်ကားကိုကြိုတင်စိမ်ထားရုံမျှနှင့်နေထိုင်ပြီးသည့်နောက်တွင်ဥယျာဉ်ရေပိုက်နှင့်အမှိုက်နှင့်အညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ အရည်အသွေးပြည့်ဝသောဓာတုပစ္စည်းများ၊ လုံလောက်သောလွှမ်းခြုံမှု၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော 'စိမ်ခြင်း' သံသရာနှင့်ပြင်းထန်သောမြင့်မားသောဖိအား / မြင့်မားသောသက်ရောက်မှုများကိုမခွဲခြမ်းနိုင်ပါ။
၂ ။ သင်သည် 'မြင့်မားသောဖိအားအမျိုးအစား' အားဖြင့်ဘာကိုဆိုလိုသလဲ
'သန့်ရှင်းရေးကျွမ်းကျင်သူများ' ၏အဆိုအရအရည်အသွေးရှိသောဓာတုပစ္စည်းများနှင့် တွဲဖက်၍ မြင့်မားသောဖိအားကို အသုံးပြု၍ သင်ထိရောက်စွာသန့်ရှင်းရေးအတွက်အရာများစွာလိုအပ်သည်။ ၁) မျက်နှာပြင်မှ ၄၅ ဒီဂရီထောင့်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြည့်သည့်အခါမျက်နှာပြင်ကိုဓာတ်လှေကားနှင့်ထောင့်ဖြင့်ရိုက်ခတ်သည်။ ၂။ အရှိန်အဟုန် - ထောင့်မှပက်ဖြန်းခြင်းသည်ရေအားလုံး (ဓာတုပစ္စည်းများ၊ ဖုန်များစသည်) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ တူညီသော ဦး တည်ချက်။ (“ Flat Fan Spray Perpendicular” …ညှပ်ကိုကြည့်ပါ) ၃) လှုံ့ဆော်မှု - သုညဒီဂရီလည်ပတ်ခြင်း (လှုံ့ဆော်မှု) nozzles များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပေါ်တွင်စံပြုထားသော ၂၅ ဒီဂရီပြားပန်ကာမှုန်ရေမွှားနှင့်မတူဘဲမျက်နှာပြင်အပေါ်ထူးခြားသောသက်ရောက်မှုများကိုပေးသည်။ 4) Volume - 1 gpm nozzle များဖြင့် 'high impact' ကိုမဖန်တီးနိုင်ပါ။ သင်သည်မြင့်မားသောထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေသောမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့မြင့်မားသောသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်စေရန်မြင့်မားသောရေပမာဏလိုအပ်သည်။ သတိရပါ - မျက်နှာပြင်မှ ၄၅ ဒီဂရီထောင့်၊ အသံအတိုးအကျယ်၊ အရှိန်အဟုန်၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်မြင့်မားသောဖိအားသည်မည်သည့်အမျိုးအစားကိုမဆိုထိရောက်သောဖိအားသန့်ရှင်းရေးအတွက်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ထည့်သွင်း!
၃ ။ ပင်မစာမျက်နှာတွင်တွေ့ရသော L ကိုလက်ကိုင်အနေနှင့်ကားရေဆေးခြင်းသည်ပလပ်စတစ်ကားရပ်နားရန်အဘယ်ကြောင့်သုံးသနည်း။
အစဉ်အလာအရပံ့ပိုးပေးသူများသည်သတ္တုလမ်းညွှန် L လက်မောင်းကိုတပ်ဆင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလပ်စတစ် L လက်မောင်းဟာသင့်ဖောက်သည်တွေအတွက်ရှင်းလင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့လမ်းညွှန်တစ်ခုဖြစ်ပြီးရံဖန်ရံခါပါဝါဆေးကြောပေးခြင်းအားဖြင့်သူတို့သည်အသစ်စက်စက်ဖြစ်လာပြီးသံချေးမသွားနိုင်ပါ။ L လက်မောင်းသည်သင်၏စက်အား HIT ရရှိလိမ့်မည်ကိုသေချာသည်၊ အကယ်၍ ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကကားကိုထိခိုက်မည်မဟုတ်ပါ။
၄ ။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းကောအသို့နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ထို့အပြင် dual arm လက်ကိုင်ကားဒီဇိုင်းသည်ကားကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာဖြင့်မြန်မြန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းကဲ့သို့သောအားသာချက်များစွာရှိသည်။ အင်ဂျင်နီယာအလွန်စိတ်မချရသောစက်များနှင့်၎င်းတို့ဖြန့်ချိသူများသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတွက်အော်ပရေတာများအတွက်ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာကုန်ကျသည်။ မကြာခဏဆိုသလိုသူတို့၏အာမခံချက်သည်တန်ဖိုးမရှိဖြစ်လာသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်အချိန်မီ မရှိ၍ ပြုပြင်ရန်အတွက်လိုအပ်သော 'ထုံးစံ' အစိတ်အပိုင်းများကိုသယ်ဆောင်။ မရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပြိုကွဲမှုအများစုသည်အရောင်းရဆုံးသောနေ့ရက်များနှင့် ပို၍ ယုံကြည်စိတ်ချရသောအခြားနည်းလမ်းများရှာသောဖောက်သည်များအဖြစ်သို့ရောက်သည်။ ဓာတ်ဆီဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်ကားတစ်စီးထပ်ခါထပ်ခါဆေးကြောရန်ဓာတ်ဆီဆိုင်တစ်ခုသည်ပါးလွှာသောမာတင်များဖြင့်လည်ပတ်နေပြီးပိုမိုဆိုးရွားသည့်အရာမရှိပါ။ သိသာထင်ရှားသည်မှာရိုးရှင်းသော၊ ရိုးရှင်းသောစက်သည် 'ဒီဇိုင်း' အားဖြင့်ကျချိန်ကိုသိသိသာသာလျှော့ချပေးလိမ့်မည်။ ဤရည်မှန်းချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အောင်မြင်စွာပြီးမြောက်အောင်မြင်ခဲ့ပါပြီ။ ဒီဟာကရိုးရှင်းပါတယ်၊ သင်မပြင်နိုင်ဘူး၊
၅ ။ CBK ဆေးကြောခြင်းနှင့်အခြား touchless ပံ့ပိုးပေးသူများအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုကဘာလဲ။
၁) စျေး၊ စျေးနှင့်စျေး! ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်စျေးနှုန်းသည်အခြားစက်များထက် ၂၀ မှ ၃၀% သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည် (စာလုံးပေါင်းမဟုတ်) ။
၂) ခေတ်မီသောဒီဇိုင်းနှင့်လည်ပတ်မှုအစဉ်အလာပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည့် CBK Wash Soluction သည်စက်ကိရိယာများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်လုပ်ငန်းများတွင် ဦး ဆောင်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကသင့်ကိုလမ်းဆုံးတိုင်းကိုကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
၃။ စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်လွယ်ကူစွာပြုပြင်ခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးလက်ဆေးခြင်းကာလ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ 'ထူးခြားချက်များ' ခလုတ်ပေါ်တွင်အခြားကွဲပြားခြားနားမှုများစွာကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်ဗီဒီယိုကလစ်တော်တော်များများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ အခွင့်အလမ်းပေးလျှင် Cbk ဆေးကြောကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး အပြည့်အဝရှင်းပြပါလိမ့်မယ်
၆ ။ ငါတို့ကားအဝတ်လျှော်စက်၏အသုံးချနယ်မြေများကော။
အိမ်သုံးကားများသန့်ရှင်းရေး၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်ဆေးကြောသန့်ရှင်းရေး၊ အမြန်ရထားလမ်း၊ မြေအောက်ရထားများနှင့်ကုန်တင်ကားကြီးများစသည်တို့ပါဝင်သည်။
ရှေ့သို့ CBK308 အသိဉာဏ်ကင်းသောစက်မဲ့ကားစက်ရေဆေးစက်
နောက်တစ်ခု: အလိုအလျောက် gantry ဘောင်ဘတ်စ်ကားလျှော်စက်
ကားအ ၀ တ်လျှော်စက်အလှအပသန့်ရှင်းရေးစက်အလိုအလျောက်စက်သုံးစက်အ ၀ တ်လျှော်ကားအ ၀ တ်လျှော်စက်
တရုတ်ရှေ့နှင့်နောက်အဝတ်လျှော် Hydroelectricity ခွဲခြာနှင့်တိုက်ရိုက် drive ကိုစနစ်ကကားရေဆေးပစ္စည်းကိရိယာများကိုခိုင်ခံ့စေ
စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောမြင့်မားသောဖိအားများကိုမဖြုတ်နိုင်သည့်ထိတွေ့မှုမရှိသောအသိဉာဏ်ရှိသော 3D ထောက်လှမ်းခြင်းစနစ်ယူနီဖောင်းမြန်သောယူနီဖောင်းကားတစ်စီး
စွမ်းအင်ချွေတာသောအဆက်အသွယ်မဟုတ်သောကားအဝတ်လျှော်စက် Yinlong စီးရီးသန့်ရှင်းရေးယာဉ်ကားရေဆေးစက်
ခန္ဓာကိုယ်အပြည့်ကားအ ၀ တ်လျှော်စက် ၁၆၀၀ ဝပ်ကားအ ၀ တ်လျှော်စက်အရေးပေါ်ကားအဝတ်လျှော်စက်
hot-dip galvanized စာရွက်ကားကိုအဝတ်လျှော်စက်
CBK108 အသိဉာဏ်ကင်းတဲ့စက်မဲ့ကားစက်ရေချိုးစက် ...
CBK308 အသိဥာဏ်ကင်းမဲ့ပြီးထိတွေ့နိုင်သောစက်ရုပ်ကားအ ...
၁၁၀၀၂၅၊ Shenyang၊ Tiexi ခရိုင်၊ အထပ် ၂၁၊ ဘူတာခ၊ Fortune အဆောက်အအုံ၊ အမှတ် ၁၈ ရှင်းဟွာ Bei လမ်း၊